English Lessons In Your Library : Nargis Library Recovery
English Lessons In Your Library
Kevin Cole Business Development at Bilingual Dictionaries Inc
No Cost English Learning Resource for Public Library Online Resources
Basic ESL is comprised of3level courses, 15 topics, 45 lessons and offers native language support in 19 languages. All FREE for Public Libraries. Basic ESL provides an effective, direct path to learning English that goes beyond games, puzzles, and travel phrases so that students & adults can succeed in their schools and communities.
Could your community and library use an online English language learning program?
basicesl.com•Basic ESL is an online English asaSecond Language learning course, class software, and study tool to learn English online if you speak Amharic, Arabic, Bengali, Chinese, Farsi, French, etc.
Tags: ESL in libraries, libraries
« Libraries Crucial to Myanmar’s Knowledge Society
MBAPF 2015 Report »
U Soe Soe
ပခုက္ကူ အထက ၁. ကျောင်းစာကြည့်တိုက်တွင်
စာရင်းသွင်း ပြီးသော စာအုပ်များအား
ဘာသာရပ်အလိုက် ဘီရိုများတွင် စီထည့်နေပါသည် ။ ... See MoreSee Less
ပခုက္ကူ ဦးအုံးဖေ စာကြည့်တိုက်မှ
အထက ၁. ကျောင်းစာကြည့်တိုက်တွင်
ရွေ့လျားစာအုပ်ငှါးရမ်းခြင်းအစီအစဉ်အဖြစ်
ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ဖတ်ချ င်စာအုပ်များ
ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ်များ အား
၁၀တန်းအောင် ကျောင်းသားများ လုပ်အားပေးမှု ဖြင့်
မျိုးတူစု စာရင်းများရေးသွင်းနေပါသည် ။
လိုအပ်သည်များကို ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ၊
တာဝန်ခံ ဆရာမ များနှင့် ညှိနှို င်းဆောင်ရွက်လျ က်ရှိပါသည် ။
ကျောင်းစာကြည့်တိုက်တွင် ကလေးများလာရောက်ဖတ်ရှုနေကြပါသည် ။ ... See MoreSee Less
• မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် ကျနော်တို့ ယုံကြည်ရာအခမဲ့စာကြည့်တိုက်ကို ကွန်ပြုတာစနစ် အသုံးပြုအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် (၁) လတာ ခေတ္တ ရပ်နားခဲ့ရတယ်။
• ဟော၊ အခုတော့ လုပ်ငန်းအားလုံး ပြီးသလောက်ဖြစ်သွားပြီမို့ (၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆) ကစလို့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် လည်ပတ်နေပါပြီ။
• စာအုပ်ငှားရမ်းမှု လုပ်ငန်းအားလုံး Digital စနစ် ဖြစ်သွားတယ်။
• စာအုပ် လာငှားယုံသာမက စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး စာထိုင်ဖတ်နိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ထားတယ်။
• နောက် E-Library (အီလက်ထရောနစ် စာကြည့်တိုက်) လည်းပဲ စီစဉ်ထားတယ်။ အများစုက PDF Ebooks တွေဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာစာအုပ် စုစုပေါင်း အုပ်ရေသိန်းဂဏန်းရှိပါတယ်။ ပမာဏ အရွယ်အစား (၅၀၀) GB လောက်ရှိပါတယ်။
• အင်တာနက်လိုင်းရဖို့ကတော့ ကြိုးစားဆဲ။ Telenor လာမယ်ဆိုလို့ စောင့်နေတာ။ အခြား အဆင်ပြေတာလေးရှိရင်လည်း အကြံပြုကြဦး။
- စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ချိန် - နေ့စဉ် မနက် (၁၀) နာရီ မှ ညနေ (၅) နာရီ ထိ။
- တနင်္လာနေ့တိုင်း စာကြည့်တိုက် နားတယ်။
လိပ်စာ - ယုံကြည်​ရာအသိပညာပြန့်​ပွား​ရေးအသင်းနှင့်​ အခမဲ့စာကြည့်​တိုက်​၊ အကွက်​ (၄၁၃/၁)၊ ​ရွှေငုဝါလမ်းသွယ်​၊ ၃၆×၃၇လမ်းကြား၊ ၇၁×၇၂လမ်းကြား၊ ​မဟာနွယ်​စဉ်​ရပ်​ကွက်​၊ မဟာ​အောင်​​မြေမြို့နယ်​၊ မန္တ​လေး။
09 97 07 45 170
09 97 485 47 44 ... See MoreSee Less